E-Macaamiisha Waxbarashada ee Forex - Soo qaado lacag bilaash ah oo loo yaqaan 'Forex Trading eBook'
Soo iibso Free ebook lacag la'aan ah
Qalab dhamaystiran oo loogu talagalay forex eBooks oo ay bixiso FXCC. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay khayraadka waxbarasho ee ugu caansan onlineka oo ku habboon ganacsatada oo dhan iyadoon loo eegin heerka khibradooda.
EBookbaan kastaa waa hage dhammeystiran oo kaa caawinaya inaad fahamto fikradaha muhiimka ah ee ganacsiga iyo abuuritaanka istaraatijiyad ganacsi ee Forex oo loogu talagalay hadafyadaada shakhsi ahaaneed. FXCC oo qayb ka ah barnaamijkeeda waxbarasho, waxay bixisaa eBook kasta oo bilaash ah.
Istaraatiijiyada Ganacsiga ee Xuquuqda ee Isku Khilaafsan Habka Hab-nololeedkaaga DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
EBookintaani waxay diiradda saareysaa jebinta khuraafaadka ah ee u dhiganta shakhsi ahaaneed si aad u ganacsato. Isticmaalka istaraatiijiyooyinka dhabta ah ee la tijaabiyey iyo kuwa la tijaabiyey, soo jeedinta ayaa lagu sameeyey sidii loo hubin lahaa in ganacsigaagu uu la kulmo istaraatijiyadda la doortay iyo sida loo hagaajiyo maskaxdaada si uu u shaqeeyo.
Ganacsatada Mindset DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Maxay muhiim u tahay marka ganacsiga loo yaqaan 'Forex' inuu yahay dareenkaaga oo la ilaaliyo. EBookintaani waxay isku dayaysaa in ay sharaxdo tallaabooyinka sida loo gaaro xaaladda maskaxda ee meesha laga saari karo go'aamada dareenka ee keeni kara in ganacsiga lumiyo oo sharxo qodobada la raacayo si loo horumariyo qorshe ganacsi oo guulaystay.
Maamulka Lacagta DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
EBookintaani waxay sharraxaysaa muhiimadda ay leedahay hagaajinta maareynta lacagta taasoo qeyb ka ah qorshaha ganacsiga. Tusaalooyinka ayaa la bixiyay natiijooyinka iyo cawaaqibta maaraynta khatarta saxda ah iyo khaldan, iyo sidoo kale sida joojinta ay u ilaalin karto xisaabta ganacsiga iyo badbaadinta khasaaraha.
Hagaagsanaanta Shaqada DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Suuqa dukaanka tafaariiqda ayaa kor u kacay sannadihii la soo dhaafay, noocyo badan oo arimahaa ayaa soo baxay. EBookintaani waxay diiradda saari doontaa STP -Gujiinta Farsamaynta iyo faa'iidooyinka noocaas ah macaamiisha.
Sida loo dhiso Qorshaha Ganacsiga Winning DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ganacsiga ayaa abuuraya qorshe ganacsi adag oo dhagax ah, kaas oo aasaas u ah horumarinta shakhsi ahaaneed iyo guusha la dhisi doono. Wax kastoo heerkeena qibradkeenu yahay, si kastaba ha ahaatee waxaan qeexeynaa xirfad iyo karti, iyada oo aan qorsheeyn ganacsi oo la tixraacayo oo aan u hoggaansanayn, waxaan si fudud u niyadjabeynaa mugdiga iyo qaadashada khiyaamooyinka xun ee tacliinta leh.
Falanqaynta Farsamada iyo Aasaasiga ah DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Inaad noqoto mid aad u fiican oo ku salaysan falanqaynta suuqyada waxaa sameeya ganacsatada shakhsiyaadka ah ee haysta aqoonta aqooneed iyo u qoondeeysiga danaha ganacsi. Buuggani waa aragti gaaban oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee ganacsiga asaasiga ah iyo farsamada.
Isticmaalka Amarada Joojinta DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Suuqa suuqa FX waxay u muuqataa in ay leeyihiin dhaqdhaqaaq aan la saadaalin karin, midna wuxuu u baahan yahay inuu haysto koontaroolo sax ah si looga hortago suurtagalnimada hal ganacsi oo u hoggaansamaya inuu burburiyo khibradooda ganacsiga. Baro sida loo xaddido oo loo xakameeyo khasaarahaaga iyada oo loo marayo isticmaalka waxtarka ah ee amarada joogsiga.
Qorshaha Ganacsigaaga DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Qorshahaaga ganacsiga wuxuu qaabeynayaa xargaha ganacsigaaga ganacsiga, waa inay ku jiraan waxyaabo muhiim ah oo kaa caawin doona ganacsigaaga iyo hamigooda. Qorshuhu maaha in uu noqdo dukumiinti aad u adag marka hore. Baro sida loo abuuro qorshaha ganacsigaaga.
Hordhac u ah aasaaska aasaasiga ganacsiga qiimaha DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Sababta aasaasiga ah ee ganacsatada qibrada leh waxay u doodi doonaan ganacsiga PA, waa sababta oo ah waxay u tixgelinayaan qiimaha sida tilmaamayaasha, calaamadaha ugu muhiimsan, jadwalkooda iyo wakhtiyada. Waxay tixgelinayaan qiimaha iyo ficilada qiimaha ee kobcaya natiijada, oo ah tilmaame horseedaya, ma aha tilmaame xaddidan.
Isku xirka Istaraatiijiyada Ganacsiga DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Maqnaanshaha waa nooc aad u caan ah oo khalad ah oo ganacsi ah. Ganacsato badan oo aan khibrad laheyn waxay u kala qaybin doonaan sidii ay isku dayi lahaayeen guulaha bangiyada yar yar, muddo gaaban. Si kastaba ha ahaatee, tani waa isbeddelka asalka ah ee asalka ah ee isdaba-joogga ah oo muujinaya sida sharaxaadda loo horumariyay wakhti ka dib, gaar ahaan inta lagu jiro horumarinta ganacsiga internetka.
Ganacsi maalmeedka sida qaabka ganacsiga DOWNLOAD eBOOK AKHRI WAX DHEERAAD AH
Sida qaabka iyo qaabka ganacsiga, ganacsiga maalintii waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee ganacsiga iyo suurtogalka ah nooca ganacsiga taas oo inta badan ganacsatada dukaamada tafaariiqdu filayaan in ay ugu dambeyntii ku mashquulaan, ama u guuraan, hal mar (iyo haddii ay) shaqadooda iyo ugu dambayntii waxay naftooda u huraan waqti buuxa, shaqada iyo warshadaha.